बस है’ भन्दै मु’स्कु’राउँदै काममा नि’स्किएका श्रीमानको आ’यो य’स्तो ख’बर, श्री’मती र बच्चाको भयो बि’च’ल्ली https://absansar.com/? – AB Sansar
बस है’ भन्दै मु’स्कु’राउँदै काममा नि’स्किएका श्रीमानको आ’यो य’स्तो ख’बर, श्री’मती र बच्चाको भयो बि’च’ल्ली https://absansar.com/?
October 8, 2020 October 8, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on बस है’ भन्दै मु’स्कु’राउँदै काममा नि’स्किएका श्रीमानको आ’यो य’स्तो ख’बर, श्री’मती र बच्चाको भयो बि’च’ल्ली https://absansar.com/?
काठमाडौ । विहान खाना बोकेर काममा निस्किएका श्रीमान असोज १४ गते देखि ह’राएका छन् । उनी संधै पौने ७ वजे तिर काममा निस्कन्थे । असोज १४ गते भने उनी ६।३० वजे नै निस्किएका थिए । त्यो दिन उनको अनुहार नि’कै म’लिनो थियो । ढोकामा पुगेर उनले फर्केर आएर बस है म गए भन्दै अ’नौ ठो ब्य’वहार दे’खाए ।
संधै ‘गएँ है’ भन्दै हिड्नुहुन्थ्यो, त्यो दिन कोठाको छेउमा पुगेर फेरी फर्किएर आएर बस है म गएँ भन्दै मन न’लागी न’लागी नि’स्किएको जस्तो गर्नुभयो, उनले भनिन्, हामी यहाँ कोठा सरेको २२ दिन मात्र भएको थियो ।उनले ६ महिना यता श्रीमानको हँ’सिलो अनुहार समेत देख्न नपाएको बताएकी छन् ।
घरवाट निस्कदा बस है म गएँ भन्दै गएका श्री’मान अहिले सम्म फ’र्किएका छैनन् । त्यो दिन अवेर सम्म श्रीमान नआएपछि उनले करिब ७ वजे तिर श्रीमतीले फोन गर्दा एक पटक फोनको घण्टी बज्यो त्यसपछि उनले फोन का टे ।अनि अहिले सम्म फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन भन्छ । काम गर्ने स्थानमा ठेकेदारलाई फोन गर्दा काम गर्ने स्थानवाट दिउसो ३ वजे नै निस्किएको ठेकेदारले बताए ।
उनले आफ्ना ठेकेदारसंग मोटरसाइकल बेच्ने कुरा गरेको आफुले सुनेको पनि बताएकी छन ।उनले त्यसपछि उनले अमाजुलाई फोन गर्दा श्रीमान त्यहाँ दिउसो ४ वजे तिर दिदीकोमा पुगेको थाहा पाएको बताइन् । उनले अहिले भने संगै काम गर्ने एक महिलासंग गएको भन्ने आफुले पनि सुनेको बताएकी छन् ।
मञ्जु परियार नाम गरेकी एक महिलासंग गएको बारेमा पनि अहिले मात्र सुनेको बताइन् । केही समय पहिला एक जनासंग अवेर राति सम्म फोनमा कुरा गरेको आफुले सुनेपछि को हो भनेर सोध्दा सिन्धुलीको एक महिला हो भनेर भनेका थिए ।अब देखि त्यसरी राती सम्म फोनमा त्यसरी कुरा नगर्नु भनेर सम्झाएको बताएकी छन् ।
ति महिला तपाईको जिवनमा त्यती धेरै महत्व राख्छिन् भन् म छोरा लिएर जान्छु भनेर भन्दा म अब त्यो महिलासंग बोल्दिन एक पटकलाई माफ गरिदे भनेर भनेक थिए ।अहिले आफ्नो श्रीमान हराएपछि जाउला…खेल प्रहरीमा उजुरी दिएको भएपनि अहिले सम्म खबर नपाएको बताएकी छन् । सानो छोरासंग उनको बि’चल्ली भएको छ ।
नेपाली भूमिमा पिलर गाढ्न खोज्ने भारतीय फौजलाई जनताले लखेटे
May 27, 2021 santosh